IPV6မွေးစားခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - MY-IP-IS.com
MY အိုင်ပီ IS - IPV6 မွေးစားခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Google ကအင်တာနက်ကိုအတွက် IPv6 ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားစုဆောင်းနေပါတယ်။ Google ကစက်မှုလုပ်ငန်း IPv6 ထုတ်မိတ်ဆက်အဖြစ်ဤအချက်အလက်ထုတ်ဝြေခင်းသည်အင်တာနက်ပံ့ပိုးက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများကကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူး။
အင်တာနက် traffic ကိုအများစုဟာ4ထံမှ0အထိနံပါတ်များလေးစီးရီးအတွက်ပါဝင်သည်ဟု, အိုင်ပီ v 255 ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။4ထရီလီယံထရီလီယံထရီလီယံ (ရန်သူအရေအတွက်တိုးချဲ့, IPv4 တီထွင်ခဲ့ပါတယ်ရရှိနိုင်လိပ်စာများထဲကအပြေးရှောင်ရှားရန်, adresses IPv6 "သာ" 340 ဘီလီယံခန့်2ရှိပါတယ်128).
yoy အောက်ကဂရပ်များတွင် IPV6 လောကီသားတို့သည်ကျယ်ပြန့်မွေးစားတွေ့နိုင်ပါသည်
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ IP ဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ ip address ကိုနှင့်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များပိုမိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ပီအပေါ်အမှာစကားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ အကြှနျုပျ၏ Ip Is Wikipedia ပေါ်မှာ။